Forum serasera malagasy mbola sac plastique ihany - Dinika forum.serasera.org
mbola sac plastique ihany
Fitohizan'ny hafatra : mbola sac plastique ihany
rasah - 09/03/2006 10:12
voamarina izao fa isan'ny mpandoto ny tontolo iainana ny sachet ireny.raha tsy voahodina mantsy izy ireny dia maharitra am-jato taona mihitsy vao potika, eto madagasikara anefa mbola vitsy ny orinasa mpanodina(recyclage).vahaolana ny fampiasana taratasy hasolo azy toa ny fanao any an-dafy any. ohatra tsara raisina io
lapino - 10/03/2006 15:56
Lany indray ny ala hanamboarana taratasy raha izay!
cutie - 10/03/2006 18:12
nga tsy loza e :cry:
Veloo - 10/03/2006 19:13
azo recyclena ny plastika knou:°)
cutie - 11/03/2006 18:58
veloo, azo ka fa any dago no vitsy ny orinasa mpanodina azy.
rasah - 12/03/2006 19:22
ny taratasy efa nampiasaina ihany no ahodina ho harona taratasy, hoatr'izany mantsy ny fanaovana ireny carton ireny
vale - 16/05/2006 18:44
na misy ny fanaovana recyclage na tsia; jereo fotsiny ny olana misy aty ivelany aty fa tsy izy rehetra ireny akory no ho voarecycler, porofo > misy toerana feno sachets manidina tsy toko tsy forohana izay asehon'ny fahitalavitra, ary tena "olana matotra"(pbs sérieux) tokoa io plastika ,plastika io; tsisy ohatry ny fanoloana azy @ ttasy ihany!!!
LazaRandri - 17/05/2006 01:43
...asakasakareo ihany fa ... raha mila produit @ beaute plastique dia mba .... aleo tsy toizana fa lazainy cutie manao publicite eo. hahaha
cutie - 17/05/2006 01:53
tangalamaitso - 17/05/2006 11:33
Nisy orin'asa iray izay vao nitsangana vao haingana eto Madagasikara mividy @ kilao ny "plastique" tsy ampiasaina intsony. Nalaza mihitsy ny fanangonana "plastique" t@ voalohany, fa avy eo tsy heno intsony ny tohiny. Tsara tohanana ny orin'asa toy ireny. Hatreto aloha, raha toa ka tsy maintsy mampiasa zavatra vita @ "plastique" ianao, dia tsy misy hafa tsy ny fitandremana mba tsy hanipitsipy azy ireny eny rehetra eny no fihetsika voalohany tokony hatao mba hiarovana ny tontolo iainana. Manaraka izany raha misy ny azo hatao, dia ezaho mba zavatra tsy vita @ "plastique" no vidiana. Somary lafolafo ihany ity fihetsika faharoa ity, ka izay no mahatonga ahy milaza hoe raha misy ny azo hatao. Ohatra: aleo kaopy vita @ fitaratra no vidina rehefa hisotro zavatra ianao fa tsy kaopy "plastique", sns e! Nefa ve moa tsy aleo mandany kely @ izao fotoana, toy izay ny ho avy iray manontolo mihitsy no ho ratsy?
cutie - 17/05/2006 22:42